जीवन यात्रा (कथा) | सिमान्तMarginal जीवन यात्रा (कथा) – सिमान्तMarginal
Homeकथा-संस्मरणजीवन यात्रा (कथा)
कथा – जीवन यात्रा
के भयो! अभय तिमीलाई, आज निन्द्रा परेन? करिव आधा रात पार गरिसकेर ब्युँझेको प्रमोदले अभयको छटपटीलाई लक्ष्य गर्दै प्रश्न गर्छ । ठूलो श्वाससंगै शब्दोच्चारणमा अभय जवाफ दिन्छ -” खै के भो कुन्नि प्रमोद मलाई पटक्कै निन्द्रा परेन ।” अभय र प्रमोद एउटै सिक्काका दुइ पाटाहरू थिए, अर्थात ऊनीहरूको दुइटा स्वरुप मित्रताको एउटा प्रतिक थियो । त्यसो त अभयका सारा कथा व्यथा प्रमोद राम्ररी जान्दथ्यो । विध्यार्थी जीवनमा एकले अर्काको दु:ख सुख मिलाउंदै आएका थिए । त्यसैले आज प्रमोद सहानुभुतिका शव्दहरुमा बोलाइदिन थाल्छ- ” चिन्ता नगर अभय, आडम्बरी समाज यस्तै हुन्छ, यो समाजलाई र यो समाजका रथी भनाउँदाहरुलाई कुनै उपमा दिनु पर्दा बाँदर भने हुन्छ । किन भने बाँदर आफू पनि गुँढ बनाउँदैन र अर्काको गुँढ पनि देख्न सक्तैन” । वास्तवमा अभयलाई अनिन्द्राको भुमरिमा उनै रोशनीको पात्रले पुर्याएको हो ।
अभय भारतको मद्रासमा अध्ययनार्थ गएको करिव एक महिना पश्च्यात आज दिउँसोमात्र रोशनीको वेदना र स्नेहले छताछुल्ल पत्र प्राप्त गरेकोले यसरी छटपटिएको थियो । प्रहोद थपिरहेको थियो कि – ”बरू भोलिनै रोशनीलाई पत्र पठाइदेउ, रोशनी पनि यतिखेर तिम्रो अनुपस्थिमा आफूलाई एक्लो महसुस गर्दिहुन । तिम्रो पत्र उनकालागि तिम्रै उपस्थिति हुनेछ ।”
अभय मद्रास आउने बेलामा बाबु आमाको स्विक्रिती बिना रोशनी एअरपोर्ट आएकी थीइन। यसै बिषयलाई लिएर रोशनीले घरमा रातो-दिन खेप्नु परेका चाहिँदा नचाहिंदा आरोप प्रत्यारोप अनी आश्वासअन र धम्कीका पिडालाई चित्रण गरेर पत्रलाई कारीव कारीव ऐनानै बनाएकी थीइन । त्यसोत अभय भयमा त्रसित थियो ।
पहाडी परिवेषमा जन्मेर पहाडकै खोंचमा मर्नु पर्ने वाध्यतासँग अभय जन्मेको भए पनि आफ्नो अथक् पारिश्रमका कारण अध्यनार्थ कथामाण्डौं प्रबेष पाउँछ । त्यतिमात्र होइन अहिले यातिखेर ऊ मद्रास गएको कारण पनि यही हो । बाबु आमाको एक्लो छोरो भएर पनि अभयलाई अपवाद नै मान्नु पर्छ उसको इच्छ र आकांक्षालाई पंक्षिको वेग दिने काम- (जस्ताकोतस्तै हास्ताक्षरमा बाँकी कथा) ⇓
8a contd. Jeewan Yaatraa-2